ဘဝမှတ်တိုင်: ♪ Click တစ်ချက်ထဲနဲ့အမှန်အကန် Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့နာမည်ကြီး Root Tool - iRoot v1.8.7.20299 ♫
♪ Click တစ်ချက်ထဲနဲ့အမှန်အကန် Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့နာမည်ကြီး Root Tool - iRoot v1.8.7.20299 ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Root Tool လေးကတော့ VRoot က Version မြင့်သွားတော့ iRoot အဖြစ်ပြောင်း သွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ Vroot ပါပဲ Version မြင့်သွားတာပါ။ iRoot ဆိုတာကတော့ Root Tools တွေထဲ မှာတော့ ဘုရင်တစ်ဆူလိုပါပဲ။ အဓိကတော့ တရုပ်ဖုန်းတွေပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်အခြားသော ဟန်းဆက် Model ပေါင်း များစွာကို Root ဖောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ One Click Root Tools ပေါ့ဗျာ။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး မှ Click တစ်ချက်ထဲ နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ Root ဖောက်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခုအသစ် ထွက်လာတဲ့ Version မှာတော့ နောက်ဆုံးထွက် Update ဖြစ်တဲ့ (Lollipop) Android OS 5.1 အထိ အောင်မြင်စွာ Root ပေါက်နေပြီလို့ Service ဆိုင်မှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကသိရပါတယ်ဗျာ။ Service သမားများနဲ့ ကလိချင်တဲ့ ဘော်ဒါများဆောင် ထားနိုင်ပါတယ်။ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/09/2016 09:38:00 pm
✔ Samsung ဖုန်း S4,S3,Note2 ဖုန်းအတွက်​ IMEI ပြဿ...
♪ ဘောလုံးပွဲများတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင် ၊ ရလဒ်များ ...
Couple Chat ချစ်သူအချင်းချင်း SMS ကနေ Chat ဖို့ပါ
MPT data များည apk ​လေးပါ
သစ်ပင်စိုက် မွေးမြူရေးလုပ် ရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ [61.2 M...
ဖုန်းတိုင်းအတွက် Google Play services အသစ်ကလေးပါ
Android ဖုန်းတွေ မကြာခဏ Hang နေရခြင်း
How To Root Samsung Galaxy A8 Lolipop 5.1.1 - SM-A...
Android Firmware မျိုးစုံကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းယူနိုင...
Android Version 5.0 နှင့်အထက် ဖုန်းများကို မြန်မာစ...
Ghost Push Trojan Killer PRO v 2.1 [ MPPG ]
Gmail Account ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နှင့် Facebook A...
Huawei Hacker Toolkit v1.4 Free Version
Modern warplanes တိုက်လေယာဉ် Game [91.2 MB] [apk]
Google Play Store App မပါဝင်တဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေအတွ...
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H Lollipop 5.1.1...
Coolpad 7232-S40 LCD Fix (10 MB)
SYH WP800 LCD Error Fix (4 MB)
SYH-WP910 Firmware Download
China Android Driver (All In One)
ဖုန်းမှာ Video တွေကို HD စနစ်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သော ...
How To Root Samsung Galaxy J7 Lolipop 5.1.1 - All ...
COC Game မှာ မြန်မာစာ Setting ထည့်ရအောင်။
SuperSU v2.67 Build 57 Beta Cracked APK is Here ![...
ဖုန်းမှာ WiFi အဖွင့်အပိတ်လေးကို Screen မှာလုပ်နိုင...
♪ လိုင်စင်နဲ့ APK တွေကို Full Version လုပ်ပေးမယ့် ...
ဖုန်းကြည့်သူအများ ဖုန်းကြည့်လို့ မျက်စိနှာရင် မျက်...
Phone calls, sms များကို (Blacklist)လုပ်ထားမယ်-Cal...
♪ MR TV, MRTV4မြန်မာ TV လိုင်းများနှင့် နာမည်ကြီ...
♪ Click တစ်ချက်ထဲနဲ့အမှန်အကန် Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ...
How to Root Sony Xperia E4 Dual
King Pro Root APK
ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်တူနဲ့ဆင်တူလန်းနိုင်တဲ့ Love l...
♪ PC ကိုပေါ့ပါးသွက်လတ်ပြီး Virus တွေရှင်းပေးမယ့် -...